अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश गर्दा बजेट पुस्तिकामा त्रुटि भएको भेटिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले उक्त त्रुटिबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्रीको...
माथागढी गाउँपालिका–२ रुप्सेस्थित सोलेमा सिँचाइका लागि पाइप गाड्दा जमिनमुनिबाट प्राकृतिक ग्यास निस्केको छ । सिँचाइका लागि पानी निकाल्न ट्युबवेल गाड्ने क्रममा जमिनमुनिबाट ग्यास निस्किरहेको छ । स्थानीय ताराबहादुर कुमालको जग्गामा ट्युबवेल गाडेर पानी निकाल्ने क्रममा ग्यास...
साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा देशभरबाट ३ लाख ४ हजार ६९ जनाको आदेदन परेको छ । आवेदकबाट १ करोड ४१ लाख ३२ हजार ८४० कित्ता सेयर माग भएको छ । यो भनेको मागको तुलनामा २।८४...
लोकतन्त्र दिवसका दिन शेयर बजार झण्डै २० अंकले बढेको छ । बजारको आकर्षणका रुपमा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन । बजारमा देखिएको यस्तो वृद्धिले लगानीकर्ताले धेरै कमाउने आकंक्षा राखेको बुझ्न सकिन्छ । बुधबार शेयर बजार परिसुचक...